सोल्टी होटल : कम्पनी विश्लेषण
कम्पनीको असार मसान्तसम्ममा खुद नाफा न्यून प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको छ । लगानी ९६ दशमलव ९७ प्रतिशत बढेर रू. ६ करोड ५९ लाख पुगेको छ ।
मैनबत्ती : शेयरमूल्यको विषयमा लगानीकर्ताहरू अन्योलमा रहेको देखिन्छ । अन्तिम दिनमा पनि टुप्पी र पुच्छर भएको सेतो मैनबत्ती बनेको छ ।
आरएसआई : न्युट्रल जोन (५४ दशमलव ५४ स्केलमा)मा छ । खरीद र विक्री चाप सन्तुलनमा छ । स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : ५ दशमलव ३६ विन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य छ ।
मुभिङ एभरेज : २१ दिने औसत मूल्य रेखा र सातदिने औसत मूल्यरेखा केही दिनदेखि एकअर्कासँग टाढिँदै गएका छन् । हालको मूल्य २१ दिने रेखा, सातदिने रेखा र ट्रेण्ड लाइनभन्दा माथि छ । हालको विन्दुबाट मूल्य सस्तिएमा रू. ४ सय ३ र मूल्य महँगिएमा रू. ४ सय २० मा टेवा पाउन सक्छ ।
- खुद नाफा शून्य दशमलव शून्य ६ प्रतिशत बढेर रू. ८ करोड ८ लाख पुगेको छ । कुल आम्दानी शून्य दशमलव २८ प्रतिशत बढ्नाले खुद नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो ।
- जगेडा कोष ९६ दशमलव ९७ प्रतिशत बढेर रू. २७ करोड ६६ लाख पुगेको छ ।
- खुद आम्दानी शून्य दशमलब २८ प्रतिशत बढेर रू. १ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । होटलको इन्भेट्री (कच्चापदार्थ लगायत) ८ दशमलव ४२ प्रतिशत बढेको छ । होटलको इन्भेट्रीमा केही वर्षदेखि नै सामान्य वृद्धि भइरहेको छ । यसले सामान खेर जाने र ती सामानमा नोक्सान बढ्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ ।
- होटलको खाद्य तथा पेय सामग्रीको खर्च १ दशमलव ८६ प्रतिशत घटेर रू. १९ करोड ५८ लाखमा सीमित भएको छ ।
- कर्मचारी खर्च ८ दशमलव २१ प्रतिशत बढेको छ भने सञ्चालन तथा प्रशासन खर्च शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत घटेको छ ।
- कम्पनीको चौथो त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख भएअनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू. १ दशमलव ५४ छ । कम्पनीको प्रतिकिता शेयरमूल्य रू. १० हो । सो आम्दानी र शेयर मूल्यको आधारमा निकालिएको पीई रेशियो साढे २ सय ७० गुणा छ । हालको शेयरमूल्य नेटवर्थको साढे १७ गुणा छ ।